KFO'n filannoo bara 2013 gaggeeffamuuf karoorfame irraa ala ta'uu beeksise - ETHIOPIANS TODAY
Mar 4, 2021 KFO
Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO) filannoo biyyaaleessaa marsaa 6ffaa barana gaggeeffamuuf karoorfame irratti akka hin hirmaanne murtoo irra gahuu beeksise. Murtoo kana kan dabarse koree hoji raawwachiistuu dhaabicha ta’uus eerameera.
Hogganaa waajjira KFO Obbo Xirunah Gamtaa DW’f akka himanitti, filannoon dura wantoota guuttamuu qaban (waajjiraalee akka deebi’anii banaman, miseensota KFO hidhaarra jiran akka gad lakkifaman) waan hin raawwatamneef filannicha irratti hirmaachuun bu’aa hin akka buusne dubbatan.
Guyyaan galmee hanga bor Guraandhala 25/2013 dheereeffamuus KFO’n hanga ammaatti kaadhimamaa tokkollee kan hin galmeessifne kanumaan walqabataa jedhan, Obbo Xirunah.
Maddi Keenya: Gadaa Post